Tetezan’i Kamoro : Mariky ny fampihavanam-pirenena ny fahavitany -
AccueilRaharaham-pirenenaTetezan’i Kamoro : Mariky ny fampihavanam-pirenena ny fahavitany
Tetezan’i Kamoro : Mariky ny fampihavanam-pirenena ny fahavitany
18/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitoetra any amin’ny lalam-pirenena faha-4, teboka kilometrika 406 no ahitana ny tetezan’i Kamoro mampitohyan’ Antananarivo sy Mahajanga. Nanomboka ny faha-17 ny volana jolay no efa azo nampiasaina ity tetezana ity taorian’ny fahasimbany. Nitokana ny fahavitan’ity fotodrafitrasa goavana sy lehibe indrindra ity ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina natrehin’ny praiministra lehiben’ny governemanta, Mahafaly Solonandrasana Olivier ary ny minisitry ny asa vaventy. Tonga nanatrika ny lanonana ihany koa ireo tompon’andraikitra vahiny niaraha-niasa tamin’ny fahavitan’ny fotodrafitrasa goavana tahaka izao, dia ny tompon’andraikitry ny fandraharahana ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara sy Komoro Coralie Gevers, ny ambasadaoro Frantsay Véronique Vouland Aneni. Tafiditra indrindra ao anatin’ ilay tetikasa haingana amin’ny fitehirizana ny fotodrafitrasa sy ny fampihenana ny faharefoana na ny PUPRIV ny fahavitan’ny asa, ary novatsian’ny banky iraisam-pirenena vola. Na dia vita aza moa ity tetezana vaovao ity, dia mbola azo ampiasaina hatrany ilay tetezana teo aloha, ary tsy mbola misy atahorana. Nandritra ny roa taona no nanatanterahana ny asa nahafahana tonga amin’ izao tombontsoa lehibe izao. Raha ny lafiny ara-teknika kosa dia fantatra fa mahazaka fiara roa indray miantoana ny tetezana vaovaon’i kamoro. Nanambara ny filohan’ny repoblika nandritra ny fanokanana ity fotodrafitrasa goavana ity fa ’’manamarika indrindra ny lasa sy ny ho avy ny fahavitan’ny fotodrafitrasa roa tahaka izao, satria tsy azo iniana hadinoina ny vitan’ny tantara sy ny tany aloha mba ho fivoaran’ny firenentsika‘’.
Manatantara amin’ny firenena ny andro omaly, hoy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina. Tsy ho an’ny mponina ao Ambondromamy fotsiny ihany fa ho an’ny vahoaka Malagasy iray manontolo mihitsy, satria dia tafiditra amin’ny asa goavana fahatelo vita anatin’ny faritra izao amin’ ilay hetsika ‘’ aotra lavadavaka’’ sy ny tetezan’i Betsiboka. ‘’Tao anatin’ny roa taona no nanamboarana ny tetezan’i kamoro, mariky ny teknolojia, saingy ny fampivoarana ny firenena dia ilaina fotoana, faharetana sy asa. Androany, sahintsika ny nampiseho teo anatrehan’ ireo mpamatsy vola fa vitantsika ny miasa haingana sy tsara. Ka ho an’ ireo izay mieritreritra ny hanakorontana dia afaka manao izy raha mahavita’’, hoy hatrany ny filoham-pirenena Malagasy. Nandritra izany ihany koa no nitondran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny teny fisaorana ho an’ireo mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ireo mpamatsy vola, indrindra ny banky iraisam-pirenena sy ny orinasa nanatontosa ny asa ary ireo izay nitoto sy nahandro nahamasaka ny fahavitan’ny fotodrafitrasa. ‘’Zava-dehibe indrindra izao fotodrafitrasa izao satria dia tafiditra indrindra ao anatin’ny tetikasa mampiseho ny taratry ny firaisan-kina, ary zava dehibe ho an’ny fampihavanam-pirenena satria ny tetezana dia taratry ny fampiraisana ny taloha sy ny ankehitriny. Ary hijerena ny vina, sy ny fahavononantsika handroso. Notazonina ny lasa amin’ny mbola fitazonana sy fanavaozana ny tetezana teo aloha, izay vakom-pirenena. Namboarintsika kosa anefa ny tetezan’i kamory vaovao izay taratry ny mbola asa fanamboarana maro eto amin’ny firenena. Tao anatin’ny fotoana fohy noho nahafahana namita izany, ary tahaka izany ihany koa ireo fotodrafitrasa hafa hotanterahina’’ . Manaraka izany dia nambaran’ny filoham-pirenena malagasy fa maika izao ny fotodrafitrasa mikasika ny angovo, saingy ‘’ilaina ny mandalo antanantohatra, dia ny fifonosana faharetana, ny fanaingana ny tanan’ akanjo ahafahana miasa haingana sy andehanana lavitra anatin’ny firahalahiana hatrany ‘’ hoy ny filoha nitondra fanamarinana. Manaraka izany dia nambarany teo alohan’ny masoivoho frantsay Véronique Voulant ‘’ny tetezan’i kamoro dia marika ny fahaiza-manao frantsay. Vokatry ny fiaraha-miasa izay iriana ny hahamafy azy, satria i Frantsa dia tazana hatrany eto Madagasikara’’.
Ny fahavitan’ny tetezan’i Kamoro dia manamaivana hatrany ny fivezivezena mankany Mahajanga sy ny tapany avaratry ny nosy iray manontolo. Ny fahavitan’ny fanavaozana ny tetezana teo aloha ihany koa dia nahafahana manome endrika ny tanàna, sy fitehirizana hatrany ny vakoka manan-tantara. Nanomboka tamin’ny 8 jona 2015 kosa ny asa fanamboarana ary mitentina 46 225 614 017 74 MGA ny vola lany tamin’ny fanamboarana. Mirefy 265,50 metatra ny halavan’ilay tetezana vao noamboarina ary efa voafaritra fa haharitra hatrany amin’ny taranaka faramandimby ny asa notanterahina. Mba hanomezana lanja ny asa vita moa dia ho tazana ao anatin’ilay vola vaovao izay hantonta manomboka ny faha-14 ny volana jolay ny sarin’ izany fotodrafitrasa manan-tantara izany.
Hery Rajaonarimampianina : Hampiharina ny lalàna hiarovana ny harem-pirenena
Raha nandray fitenenana nandritra ny fitokanana ny Tobim-pandanjana fiara vaventy teny Ambohimalaza, eny amin’ny Lalam-pirenena Faharoa (RN2) ny Filoha Hery Rajaonarimampianina omaly, dia nambarany fa mila hampiharina ny lalàna mba hiarovana ny harem-pirenena. “Mila mampihatra ...Tohiny